Lies and an Important Role of Parents – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 12 February 2010 17 February 2010 Categories Parenting, Reproduction
7 thoughts on “Lies and an Important Role of Parents”
13 February 2010 at 7:58 am
ကောင်းတယ်ဆရာရေ…နောက်ဆုံးပိတ် မှာ ရေးထားတာလေး က အကောင်းဆုံးပဲ။
Though I don’t agree with some of your opinions and advices posted in this blog, I am really glad that you also did raise very valid points in some of your posts. Of course – if you notice – I usually comment on those posts which I feel as having valuable opinions (purely by my own standard).
In fact, this issue has beenaproblem between me and my parents over decades. I don’t want to say that I did my fair share of lying in my younger days because of them butasimple affair as just going out withagroup of friends – where boys were also present – had to revolve aroundasmall lie, for they restricted me from mingling with boys very often. When parents put restrictions on children without first trying to understand the situation from children’s point of view, they create unnecessary circumstances for children to come up with lies. Children will just conclude that their parents don’t try to understand them and become rebellious. My parents are, withoutadoubt, the most wonderful parentsaperson could ever have. They make sacrifices, always give the best to their children. Without them, I wouldn’t be who I am today – in terms of education level, status in life and career. But as for my independent mindset, I had to fight hard to cultivate it.
There is one thing I can never agree with my parents. They believe that if the children listen to parents’ advices, they will make less mistakes in life and it will be better for them. On my part, since young, I’ve always been independent in thinking; and have always preferred to make my own judgment and decision. I believe that no one can escape from making mistakes and we learn the best from our own mistakes. It’s true that when we are young, we tend to be irrational and may falter unnecessarily. But that doesn’t mean parents should just tell us what to do and we follow their decisions. Rather, parents need to guide their children to become rational in their thinking and make sound judgments in life; and they need to learn to trust their children and let them make their own decisions as well.
If my parents had been more open like you, or, if I had not been so adamant about being independent in thinking, my relationship with them could have been closer. I’ve finally come to realise and accept that neither my parents nor I can be considered as being at fault. It was simplyamismatch in mindset, right from the start.
12 September 2014 at 5:29 pm
ကိုကြီးကျော်ရေ ဆရာမကြီး မသင်းသင်းကလည်း ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ပျိူးခင်းထောင်နေတဲ့ ဆရာတော်အရှင် ဆေကိန္ဒရဲ့ လေသံအတိုင်းပဲလိုက်ပြောနေပြန်ပြီ။ မိဘတွေလဲ အမြဲမမှန်နိုင်ဘူးတဲ့။ ဒီစကားကိုတော့ ဆရာတော်အမိန့်ရှိကတည်းက လက်ခံထားပြီးသားပါ။ကိုယ်တိုင်လဲမိဘတစ်ယောက်
ဖြစ် နေပြီဆိုတော့လေ။သားသမီးတွေရဲ့ ပုဗ္ဗာစရိယ အနေနဲ့မလိမ်မိအောင်တော့သတိနဲ့
နေထိုင်အသက်ရှင်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပါ။အမှန်အတိုင်းပြောလို့လည်း အကျိုးမရှိဘူး၊လိမ်လည်းမပြောချင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမျိူးတွေမှာတော့ ဓားမိုးပြီးပြောခိုင်းရင်တောင် မပြောဘဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပေါ့လေ။ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အရ စကားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အကုသိုလ်က အများဆုံးမဟုတ်လား။
20 February 2010 at 7:31 pm
မိဘက သူမဟုတ်တာလုပ်တိုင်း သားသမီးကိုပါ မဟုတ်တာလိုက်လုပ်ခွင့် တန်းတူပြန်ပေးတာကတော့ သဘောတူစရာ မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။
မိဘ ဆေးလိပ်သောက်လို့ သားသမီးကို သောက်ခွင့်ပြုတဲ့ကိစ္စကို ကြည့်ပါ။
၁။ မိဘက အရွယ်ရောက်နေပါပြီ၊ သားသမီးက ဆေးလိပ်သောက်ဖို့အတွက် ငယ်ပါသေးတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတချို့မှာတော့ ၁၈ နှစ်မပြည့်ရင် ဆေးလိပ်မရောင်းပါဘူး။ ဗြောင်သောက်ခွင့်ပြုလိုက်လို့ သားသမီးက လိမ္မာရင် တော်သေးတယ်၊ တစ်လိပ်ပေါ့၊ နှစ်လိပ်ပေါ့။ ဟ…ခွင့်ပြုထားတာပဲ ကိုင်မယ်ကွာဆိုရင် ခက်ရချည်ရဲ့။
၂။ မိဘတွေမှာက မိသားစုအတွက်၊ ပိုက်ဆံရှာရတယ်၊ အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းရတယ်။ ပင်ပန်းကြတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ထွက်ပေါက် တစ်ခုအနေနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်နည်းနည်းပါးပါး မှီဝဲတာရှိမယ်။ ဒါကို သားသမီးက တန်းတူလိုက်လုပ်လို့ မရပါဘူး။ သူက မိဘပေးတဲ့မုန့်ဖိုးလေးယူ၊ ကျောင်းလေးသွား၊ အိမ်ပြန်လာရင် အရန်သင့် ထမင်းလေး စားနေတာကိုး။ နော်။
တကယ်တော်တဲ့ သားသမီးက မိဘလုပ်တိုင်း မလုပ်ပါဘူး။ လိမ္မာကြပါတယ်။ ကောင်းတာ ဆိုးတာ သူသိပါတယ်။ မိဘတွေကိုလည်း နားလည်ပါတယ်။
မိဘကိုတောင် တစ်ခါတလေ သူက ပြန်နားချတတ်ပါသေးတယ်။ အဖေရယ် နည်းနည်းလျှော့သောက်ပါဗျာတဲ့။
မလိမ်ဖို့၊ ရိုးသားဖို့ ပြောတဲ့အချက်ကတော့ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် သဘောတူပါတယ် ဆရာ။
20 February 2010 at 8:20 pm
သဘောတူစရာ မကောင်းဘူးလို့ ယူဆရင် မတူပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ စဉ်းစားတော့ ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
၁။ ခိုးသောက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကိုလည်း တွက်ချက်ဖို့လိုပါတယ်။ ခွင့်မပြုခြင်းကြောင့် လူပျိုပေါက်စတွေက လိုက်နာမယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ မယူဆ မယုံကြည်တာ အမှန်ပါ။ ကျွန်တော့်အဖေက အင်မတန် ဆေးလိပ်သောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆေးလိပ်သောက်တာ မိသွားတိုင်းလည်း ဖင်အသားနီလန်အောင် ဆော်ပလော်တီးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကြောက်ပါပြီအဖေရဲ့… နောက် မသောက်တော့ပါဘူးခင်ဗျလို့ အသံပျာအောင် အော်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့… ကျွန်တော် ဆေးလိပ်ကို ဖြတ်ရခက်အောင် စွဲနေတာလည်း အမှန်ပါခင်ဗျာ။
၂။ မိဘတွေပဲ ပင်ပန်းတာလားဆိုတာလည်း မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ဆင်လည်း ဆင့်အထွာ၊ ဆိတ်လည်း ဆိတ်အထွာနဲ့ ပင်ပန်းကြသူချည်းပါ။ ကလေးသူငယ်စိတ်ပညာမှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကို မုန်တိုင်းထန်ထန် စိတ်ဒဏ်သင့်သင့် (storm & stress) လို့ သတ်မှတ်ကြဖူးပါတယ်ခင်ဗျား။ ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာလည်း သူတို့ စိတ်ပင်ပန်းမှုနဲ့ သူတို့ရှိပါတယ်။ ငါကတော့ ပိုက်ဆံရှာနေရလို့၊ ငါကတော့ အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းရလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ငါလုပ်ချင်တာ လုပ်မယ်၊ ဒါတော့မှန်တယ်၊ မင်း လိုက်လုပ်ရင်တော့ မှားတယ်ဆိုတာမျိုးက အင်း… လူနဲ့ လူချင်း မလေးစားရာ ရောက်လွန်းတယ်လို့ ကျွန်တော် ခံစားရပါတယ်။ မိဘဖြစ်သွားတာနဲ့ စေတစ်လုံးပိုင်ရှင် အလုံးစုံကို ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူသော သိကြားမင်းတွေ၊ ဧတဒဂ်တွေ ဖြစ်မကုန်သလို သားသမီးဖြစ်တာနဲ့လည်း မိဘစေသမျှ မှားမှားမှန်မှန် အကုန်လုံးနာခံရမယ့် တိရစ္ဆာန်တွေ၊ ကျွန်ကလေးတွေ ဖြစ်မကုန်ကြပါဘူး။
တကယ်တော်တဲ့ သားသမီးက မိဘလုပ်တိုင်း မလုပ်ဘူးဆိုတာလည်း မျက်မှောင်ကုပ်မိတယ်။ တွေ့တော့ တွေ့ဖူးတယ်၊ အဖေက နောက်မိန်းမတွေ တစ်သီကြီးယူပေမယ့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို ခါးဝတ်ပုဆိုးလို မြဲတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေကို ဆုံဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်းစစ်တော့ သူတို့က ဖအေနဲ့ ရင်အုပ်မကွာနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူး၊ မအေနဲ့ ကျန်ခဲ့တာ။ မအေရဲ့ သဘောထားမြင့်မြတ်မှုနဲ့ သွန်သင်မှုများက အခရာကျသွားပါတယ်။ အဲ… ဆိုးတာက သူတို့အဖေလုပ်သလို မယားငယ် ထပ်မယူပေမယ့် သူတို့အဖေ တစ်ခါဖူးမှ လုပ်မသွားတဲ့ အရက်သောက်ခြင်းအမှုကို ခုံခုံမင်မင်ပြုကြတာများ လူကြားလို့မကောင်းတဲ့ အရက်သမားကြီးများဘ၀ ရောက်ကုန်တာလည်း အမှန်ပါပဲ။ အဲတော့… တကယ်တော်တဲ့ သားသမီးကိစ္စက မဆွေးနွေးကြရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကောင်းတာ ဆိုးတာကို သားသမီးတွေ သိပါတယ်။ ကျွန်တော် သားသမီးဘ၀တုန်းကလည်း သိခဲ့တာပါပဲ။ သို့သော် ကောင်းတာ သိတိုင်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ သောတာပန်တွေချည်းဖြစ်ကုန်မယ့် အချက်ကိုလည်း ဆင်ခြင်တော်မူကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ… တရားဘာဝနာ ပွားများတယ်ဆိုတာ ကောင်းမှန်း သိကြသူချည်းပဲ မဟုတ်လား။ သို့သော် ငါးပါးသီလလေးတောင်မှ မမြဲတဲ့သူတွေ ပေါများလှတဲ့ သည် ဒွန္နယာကြီးမှာ ကောင်းတာဆိုးတာ သိတာလေးတစ်ခုနဲ့တင် လူတော်လို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ကတော့ လူတော်တွေနဲ့ပဲ ပြည့်နှက်နေတော့မှာပေါ့ခင်ဗျာ။
23 February 2010 at 9:05 am
Bravo! ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောထားလို့ ပြန်ဖြေရှင်းထားတာကိုပိုတောင်ကြိုက်သေးတယ်…
5 November 2011 at 9:12 am
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ရေးတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်။ စာရေးဆရာတွေကိုလည်း ထူထုရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာ။ ဆရာ ကတော့ စာရေးတဲ့အခါမှာတော်တော့်ကို စေတနာထားပြီးရေးလို့ …… အထူးပဲလေးစားမိပါတယ်
Previous Previous post: Another Excerpt from ATK’s Newly Published Book
Next Next post: A Modern Version of Mom’s Love